Web Toolbar by Wibiya Guriga Qoyska & Wanaaga Bulshadda - Articles: Suugo macaan (casho ama qado)
Suugo macaan (casho ama qado)
WQ: Khadijahome.Com 2012-04-27khadijahome@khadijahome.com
Waxaad ka samaynayso
600g hilib shiidan3 basal waa wayn2 tamaandho xabuub1 tamaandho qasacad (daasad)1 tamandho shiishiid3 toon waawayn1 xidhmo kamasar caleen½ koob saliid saytuun (ama saliida caadiga ah)1 qaado xawaashMilix, basbaas iyo waxaad ku siyaadin kartid
Qaabkaad u samayn
Hilibka shiidan waxaad ku ridaa madiibada (weelka) aad ku samaynayso, kadib waxad si yar yar u jar jartaahal xabo oo basasha ah iyo kamasarta kadibna waxaad ku dartaa hilibka, kadib isku walaaq eeg sawirka hoose.
Kadibna ku dar xawaashaka iyo milixda iyo wixii kale ee aad raacin karto eeg sawirka hoose.
Markaa kadib waxaad isu diyaarisaa sidaad u samayn lahayd suugada. Waxaad jar jartaa 2da xabo ee basasha ah, kadib saliida dabka saar kadibna basasha ku shiil eeg sawirka hoose
Kadib waxaad ku dartaa tamaandho xabuubtii oo aad jar jartay, tamaandhada qasaca, tamaansho shiishiidka, milix, kamasarta, milixda eeg sawirada hoose.
Kadib waxaad ku kordhisaa wax yar oo saliida kadibna dabka u daa ilaa 5-8 daqiiqo. eeg sawirka hoose
Inta ay suugadu kuu saaran tahay waxaad diyaarisaa hilibka adigoo u samaynaya sida ka muuqata saiwrka hoose.
Kadib waxaad ku dartaa suugada sida ka muuqata sawirka hoose.
Kadib dabka u daa ilaa ay si fiican isoogu bislaanayaan, dabkana dhexdhexaad uga dhig.
Waatan cuntadii oo diyaar ah, waxaad ku cuni kartaa noockasta oo roodhi ah ama siday kula noqoto. Cunto macaan.
FG: waxaad samayn kartaa in hilibka aad gooni u shiisho inta aadan ku darin suugada ka hor.
600g hilib shiidan
3 basal waa wayn
2 tamaandho xabuub
1 tamaandho qasacad (daasad)
1 tamandho shiishiid
3 toon waawayn
1 xidhmo kamasar caleen ½ koob saliid saytuun (ama saliida caadiga ah)
1 qaado xawaash
Milix, basbaas iyo waxaad ku siyaadin kartid
5860 Reads ·
·Casho/ qado Hilib adhi iyo kaabash
·Casho – quraac khafiif ah
·Quraac Casho Wanaagsan
Render time: 0.19 seconds - 68 Queries
2,787,933 unique visits